एक युगको अन्त्य हुँदा बार्सामा क्रान्ति एक मात्र बिकल्प – Talking Sports
युरोपमा अहिले सम्मकै सबैभन्दा ठूलो पराजय बेहोरेपछि किके सेटियनको प्रशिक्षण करिअर समाप्त भएको संकेत दिएपनि बायर्न म्युनिखसँग च्याम्पियन्स लिगमा ८–२ को लज्जास्पद अरु पनि समाप्त भएको महसुस हुन थालेको छ ।
सेटियन शायद अब यो सप्ताहन्तसम्म पनि टिक्ने छैनन् तर आठ महिनामा दोश्रो प्रशिक्षकको बर्खास्त गर्ने बिषय अब बार्सिलोनाको लागि सबैभन्दा कम समस्याको कुरा भएको छ । “म निरन्तर (प्रशिक्षकको रुपमा) रहन्छु या रहदिन त्यो भन्न निकै हतार हुनेछ र यो ममा मात्रै भर पर्दैन,” सेटियनले भने ।
“क्लबलाई परिवर्तनहरुको आवश्यकता छ । यहाँ म लगायत कोही पनि अछुतो छैन । यो सबै परिवर्तनका लागि ताजा रगत चाहिएको छ । हामी सबैन्दा तल्लो स्थानमा पुगेको छौं,” डिफेण्डर जेरार्ड पिकेले हारपछि भनेका थिए ।
युरोपको सबैभन्दा सशक्त टोलीबिरुद्ध बार्सिलोनाको बिगतका असफलताहरुलाई लुकाउन जिम्मेवारी लियोनल मेस्सी एक्लैलाई दिइएको थियो । तर बार्साको झिनो आशालाई बायर्नले नराम्ररी ध्वस्त पारिदियो । मेसीले बारम्बार हामी राम्रो छैनौं भन्दै आइरहदा बायर्नसँगको हारले बार्साको टोली अब त्यही लयमा खेल्न नसक्ने कुरालाई स्पष्ट नै पारिदिएको छ ।
मेस्सीले टोलीमा अब त्यो धार नरहेको फेब्रुवरीमा भन्दै आइरहेका थिए, र जुलाईमा पनि । व्यवस्थापनसँग हतोत्साह पोख्दै रियल म्याड्रिलाई ला लिगाको उपाधि सुम्पन पुग्दा नै बार्साको यो सिजनको मुल्यांकन भइसकेको थियो । मेस्सीले यो सबै देखिसकेका थिए तर केही गर्नका लागि भने ढिलो भइसकेको थियो । अब प्रश्न के मेस्सी बार्साले गर्न गइरहेको सुधारको प्रकृया हिस्सा बन्न चाहन्छन् या चाहदैनन् भन्ने नै हो ।
मेस्सीले बार्सा छोड्नका लागि केही बिश्वंस नै हुनु पर्ने धेरैले मान्दै आएका छन् तर युरोपको सबैभन्दा ठूलो क्लब च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर–फाइनलमा ८–२ ले पराजित हुनुभन्दा ठूलो बिश्वंस अरु के हुन सक्छ र ?
बायर्नसँगको लज्जास्पद हार बार्साका लागि एएस रोमा र लिभरपुलसँग आत्मसमर्पण गर्दा भन्दा बढी पिडादायी छ । त्यस समय हेलचेक्र्याईका कारण बार्साले च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जित्ने मौका गुमाएको थियो । बार्सालाई उपाधिको दाबेदारको रुपमा हेरिने भएकाले नै धेरै स्तब्ध थिए ।
यसपटक फुटबल बझेकाहरुले बार्सा जित्ने अपेक्षा नै गरेका थिएनन् । बार्सा नराम्ररी पराजित हुने अपेक्षा त थियो तर यो स्तरमा हुने कसैले पनि सोचेका थिएनन् । चौथो मिनेटमा शुरु भएको अपमान ८९ औं मिनेटसम्म जारी रहेको थियो । १ सय मिलियन पाउण्ड भन्दा बढी रकम खर्च गरिएका तीन खेलाडीहरु बेञ्चमा रहदा नै बार्साको अपमान किक आफ अघि नै शुरु भइसकेको थियो ।
ती मध्यै एक फेलिपे काउटिन्हो बायर्नको बेञ्चमा थिए र उनले आफूलाई लोनमा पठाएको क्लबबिरुद्ध दुई गोल गरिदिए । पहिलो गोल त मन लाग्दा नलाग्दै गरिएको थियो ।
बहादुरीपूर्ण निर्णय बाकी
३३ बर्षको उमेरमा मेस्सी आफ्नो अन्त्य नजिकिरहेको राम्ररी बुझ्छन् तर आइ परेको स्थितिमा मात्रै उनले आफ्नो निर्णय लिनेछन् । तर ३३ बर्ष नै रहेका पिके र लुईस सुवारेजसँगै ३१ बर्षका सुजियो बुस्के र जोर्डि आल्बा भाग्यमानी नुहन सक्छन् ।
यी सबै खेलाडीहरुले बार्साको सुनौलो युगमा खेलेका छन् तर त्यो युग धेरै अघि रहेको लाग्न थालेको छ । यदि बार्साले आफ्नो टोलीलाई ब्युताउदै फेरि त्यो युगमा पुर्याउन चाहन्छ भने केही कठिन निर्णयहरु लिन आवश्यक छ ।
क्लबको भविष्यको रुपमा हेरिएका फ्रेंकी डे जोङ्ग, अन्सु फाती र रिकी पुइग उनीहरु अगाडीको पुस्ताको असफलताको पिल्सिएका छन् । उनीहरुलाई नेतृत्व सम्हाल्नका लागि तयार गर्ने काम पनि शायद कमै भएको छ ।
यदि यो बार्सिलोनाको युगको अन्त्य हो भने च्याम्पियन्स लिगमा स्पेनको पनि हो । स्पेनको राष्ट्रिय टोलीलाई ओभर टेक गरिसकिए पनि च्याम्पियन्स लिग रियल म्याड्रिडको साम्राज्य बन्दा मेस्सीले बार्सालाई चुनौतिपूर्ण टोलीको रुपमा कायम राखेका थिए । तर अहिले भने होइन ।
२००७ पछि पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलमा स्पेनिस क्लब हुने छैन भने २००५ पछि मेस्सी वा क्रिष्चियानो रोनाल्डो हुने छैनन् । बार्साको क्रान्तिलाई अब कसले नेतृत्व गर्ने छन् त्यो हेर्न बाकी छ । जनवरीमा जाभी हर्नान्डेज, मउरिसियो पोचेटिनो र रोनाल्ड कोमनले प्रशिक्षक बन्ने प्रस्ताव नकार्दा के उनीहरु अब भने इच्छुक होलान ?
ठूला खेलाडी थप्नको लागि अब पैसा नभएकोले बार्साले अब क्लब भित्रै बिकल्पहरु हेर्नु पर्नेछ । तर यो लामो प्रोजेक्टको रुपमा मात्र हुनेछ । क्लबको २०२१ मा हुने चुनावपछि आउने नयाँ बोर्डले नयाँ प्रशिक्षक दिन सक्ला तर अबको एक बर्ष पनि वर्तमान अध्यक्ष जोसेप बार्तोमेउलाई निकै लामो लाग्नेछ ।
“आज बिश्वंस नै भयो । हामीले केही निर्णयहरु यसअघि नै लिने बिचारमा पुगिसकेका छौं । अब आउने केही दिनमा थप निर्णयहरु लिनेछौं,” बार्तोमेउले भने ।